Monument Valley 2 yakagadziridzwa kuwedzera zvinyorwa zvitsva | IPhone nhau
Kubva Monument Valley yakatangwa paApp Store muna2014, zita iri rave bhenji yemitambo yepuzzle. Muna 2017, ustwo, mugadziri wemutambo uyu, akaburitsa Monument Valley 2, mutambo unowedzera zvirimo mushanduro yekutanga uye hausati wagamuchira zvemukati zvitsva kubvira ipapo.
Uye ini ndinoti ini ndanga ndisiri kugamuchira zvemukati zvitsva, nekuti iko kunyorera kwave kungovandudzirwa wedzera zviitiko zvina zvitsva iyo yavanoda kuzivisa nayo kuitira kuti tinyore pachirongwa cheKutamba kwePlanet chekuchengetedza masango.
Chitsauko chedu chitsva cheMonument Valley 2 chiri OUT NOW! Sango Rakarasika chitsauko chakakosha chatakagadzira kubatsira kudzivirira miti, semupiro wedu kuKutamba KwePlanet Green Game Jam!# monumentvalley2 #KutambaNePlaneti #GreenGameJam pic.twitter.com/CjqYvrZqUT
- ustwo mitambo (@ustwogames) October 14, 2021
Mukutsanangurwa kweiyi nyowani yekuvandudza, tinogona kuverenga:
Sango Rakarasika chitsauko chatakagadzira kubatsira kudzivirira miti, sechikamu cheGreen Game Jam yeiyo Kutamba yePlanet chirongwa.
Nezviitiko zvina zvepedyo izvi, tinotarisira kukukurudzira kusaina chikumbiro che Play4Forests uye nekuzivisa kufarira kwatinoita kuchengetedza masango.
Chinangwa chechirongwa ichi, sezvakataurwa kubva pawebhusaiti yavo ndeichi:
Masango edu, mumwe wevabatsiri vedu vakanyanya mukurwisa mamiriro ekunze, arikutarisana nekutyisidzirwa kuri kukura. Izwi rako rinogona kubatsira kuve neramangwana riri nani kumasango nevanhu. SeUN, iri basa redu kugadzira shanduko yeramangwana rakasimba, asi nerubatsiro rwako chete ndipo patinogona kuita kuti nharaunda yepasi rose inyatsoita.
MuMonument Valley 2 chinangwa chedu ndechekutungamira amai nemwanasikana wavo mune yavo rwendo kuburikidza nemashiripiti maumbirwo uko kwavachawana nzira dzisingagone uye mapuzzle anoshamisa pavanoburitsa zvakavanzika zveNoyera Geometry.
Monument Valley 2 Inowanikwa muApp Store ye1,99 euros. Kana iwe uri mushandisi weApple Arcade, unogona kunakidzwa nemutambo uyu pamutengo wekunyorera kuburikidza neMonument Valley + pamusoro pemamwe mazita mazana maviri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Monument Valley 2 yakagadziridzwa kuwedzera zvinyorwa zvitsva